Izindaba - Okuklanywe Kahle I-China Portable Installation System I-Wholesale Eshisayo Nabandayo Yomshini Wokuhlanza Amanzi
Okuklanywe Kahle I-China Portable Installation System ye-Wholesale Eshisayo Nabandayo Yomshini Wokuhlanza Amanzi
Sibuyekeza ngokuzimela yonke into esiyincomayo.Singase sizuze ikhomishini uma uthenga ngezixhumanisi zethu.Funda kabanzi >
Senze i-Aquasana Claryum Direct Connect ukukhetha okuhle kakhulu - kulula ukuyifaka futhi inikeza ukugeleza kwamanzi okuphezulu kompompi abakhona.
Abantu abaphuza ngaphezu kwamalitha ambalwa amanzi aphuzwayo ngosuku kungenzeka baneliseke kakhulu ngesistimu yokuhlunga engaphansi kukasinki njenge-Aquasana AQ-5200. Uma ukhetha (noma udinga) amanzi ahlungiwe, lokhu kungahlinzekwa ngokuqhubekayo kusuka hlukanisa kampompi njengoba kudingeka.Sincoma i-Aquasana AQ-5200 ngoba isitifiketi sayo sihamba phambili kunoma iyiphi isistimu esiyitholile.
Igunyazwe ukungcola okuningi, okutholakala kabanzi, okuthengekayo, futhi kuhlangene, i-Aquasana AQ-5200 iwuhlelo lokuqala lokuhlunga amanzi angaphansi kukasinki esilufunayo.
I-Aquasana AQ-5200 iyi-ANSI/NSF egunyazwe ukuthi isuse ukungcola okuhlukene okucishe kube ngama-77, okuhlanganisa umthofu, i-mercury, izakhi eziphilayo eziguquguqukayo, imithi yezokwelapha, nezinye izinto ezingavamile ukuthwebula izimbangi. ekwakhiweni kwezinto ezingaqinile, ezathola iseluleko sezempilo se-EPA ngoFebhuwari 2019.
Isethi yezihlungi ezishintshayo zibiza cishe u-$60, noma u-$120 ngonyaka ngomjikelezo onconyiwe we-Aquasana wokubuyisela wezinyanga eziyisithupha. Futhi, isistimu inkulu kuphela kunamathini ambalwa esoda futhi ayithathi isikhala esiningi esibalulekile ngaphansi kukasinki. Lolu hlelo olusetshenziswa kabanzi lusebenzisa i-hardware yensimbi yekhwalithi ephezulu, futhi ompompi bayo bafika ngezindlela ezihlukahlukene.
I-AO Smith AO-US-200 iyafana ne-Aquasana AQ-5200 ngokwezitifiketi, ukucaciswa nobukhulu, futhi ikhethekile kweka-Lowe, ngakho ayitholakali kabanzi.
I-AO Smith AO-US-200 iyafana ne-Aquasana AQ-5200 kukho konke okubalulekile.(Lokho kungoba u-AO Smith wathenga i-Aquasana ngo-2016.) Inesitifiketi esifanayo se-premium, i-hardware yensimbi yonke, kanye ne-compact form factor, kodwa ayikandile kangako ngoba ithengiswa kwa-Lowe kuphela, futhi umpompi wayo ufika endaweni eyodwa kuphela Ukwelashwa: I-Nickel Exutshwe.Uma lokho kufanelana nesitayela sakho, sincoma ukuthenga phakathi kwamamodeli amabili ngentengo: eyodwa noma enye ivame ukwehliswa.Hlunga izindleko zokushintshwa ziyefana: cishe u-$60 ngesethi, noma u-$120 ngonyaka ngomjikelezo wezinyanga eziyisithupha ophakanyiswe ngu-AO Smith.
I-AQ-5300+ inezitifiketi ezifanayo ezinhle kakhulu kodwa ezinokugeleza okuphezulu namandla okuhlunga ezindlini ezisebenzisa amanzi amaningi, kodwa zibiza kakhulu futhi zithatha indawo eyengeziwe ngaphansi kukasinki.
I-Aquasana AQ-5300+ Max Flow inezitifiketi ezingu-77 ze-ANSI/NSF njengezinye izinketho zethu eziphezulu, kodwa inikeza ukugeleza okuphezulu (0.72 vs. 0.5 amalitha ngomzuzu) namandla okuhlunga (800 vs. 500 amalitha).Lokhu kuyenza ibe inketho yemizi edinga amanzi amaningi ahlungiwe futhi efuna ukuwathola ngokushesha ngangokunokwenzeka.Ibuye yengeze isihlungi sangaphambili se-sediment, i-AQ-5200 engenaso.Lokhu kungase kwandise ukugeleza okuphezulu kwezihlungi ezingcolile ezindlini. enamanzi anothile ngenhlabathi. Lokho kusho, imodeli ye-AQ-5300+ (enesihlungi samabhodlela angu-3-litre) inkulu kakhulu kune-AQ-5200 ne-AO Smith AO-US-200, kodwa inempilo efanayo enconyiwe yesihlungi engu-6. izinyanga.Futhi izindleko zayo zangaphambili kanye nezindleko zokushintsha izihlungi ziphezulu (cishe u-$80 isethi ngayinye noma u-$160 ngonyaka).Ngakho kala izinzuzo zakho ngokumelene nezindleko eziphezulu.
I-Claryum Direct Connect ifaka ngaphandle kwezimbobo zokumba futhi ilethe amalitha angu-1.5 amanzi ahlungiwe ngomzuzu ngompompi wakho okhona.
I-Claryum Direct Connect ye-Aquasana ixhuma ngqo kumpompi osuvele ukhona, okuyenza ibe inketho ekhangayo ngokukhethekile kubaqashi (abangase bavinjwe ukushintsha indawo yabo) nalabo abangakwazi ukufaka impompi yesihlungi ehlukile.Akudingeki nokuthi ifakwe usinki odongeni lwekhabhinethi - ingamane ilale ngohlangothi.Ihlinzeka ngezitifiketi ezingama-77 ze-ANSI/NSF njengezinye izinketho zethu ze-Aquasana ne-AO Smith, futhi iletha amanzi ahlungiwe afinyelela ku-1.5 ngomzuzu, ngaphezu kwamanye. umthamo olinganiselwe wamamalitha angu-784, noma cishe izinyanga eziyisithupha zokusetshenziswa. Kodwa awunaso isihlungi sangaphambili se-sediment, ngakho-ke uma unezinkinga zentlenga, akuyona into enhle ngoba izovala. Futhi inkulu — 20½ x 4½ amayintshi. - ngakho-ke uma ikhabethe lakho likasinki lilincane noma liminyene, cishe ngeke lilingane.
I-AQ-5300+ inezitifiketi ezinhle ezifanayo kodwa ezinokugeleza okuphezulu namandla okuhlunga ezindlini ezisebenzisa amanzi amaningi, kodwa zibiza kakhulu futhi zithatha indawo eyengeziwe ngaphansi kukasinki.
Bengilokhu ngihlola izihlungi zamanzi ze-Wirecutter kusukela ngo-2016.Embikweni wami, ngibe nezingxoxo ezinde nezinhlangano zokuqinisekisa izihlungi ukuze ngiqonde ukuthi ukuhlolwa kwazo kwenziwa kanjani, futhi ngamba kusizindalwazi sazo somphakathi ukuze ngiqinisekise ukuthi izimangalo zomkhiqizi zisekelwa ukuhlolwa kwesitifiketi.I futhi wakhuluma nabamele abakhiqizi abambalwa bokuhlunga amanzi, okuhlanganisa i-Aquasana/AO Smith, i-Filtrete, i-Brita ne-Pur, ukubuza ukuthi bathini. ubungane bubalulekile edivayisini oyisebenzisa izikhathi eziningi ngosuku.Owayengusosayensi we-NOAA u-John Holecek wacwaninga futhi wabhala imihlahlandlela yesihlungi samanzi se-Wirecutter, wazihlolela ngokwakhe, wagunyaza ukuhlola okwengeziwe okuzimele, futhi wangifundisa okuningi engikwaziyo. wakhela phezu kwesisekelo sakhe.
Ngeshwa, ayikho impendulo elingana neyodwa yokuthi uyasidinga yini isisefo samanzi.E-United States, ukuphakelwa kwamanzi komphakathi kulawulwa yi-EPA ngaphansi koMthetho Wamanzi Ahlanzekile, futhi izindawo zokuhlanza amanzi zomphakathi kufanele zihlangabezane neziqinile. izindinganiso zekhwalithi.Kodwa akuzona zonke izinto ezingase zibe ukungcola ezilawulwayo.Ngokufanayo, ukungcola kungangena emanzini ngemva kokuphuma endaweni yokuhlanza ngamapayipi avuzayo (PDF) noma ngamapayipi ngokwawo.Ukuhlanzeka kwamanzi esitshalweni (noma ukunganakwa) kungabhebhethekisa ukugeleza emanzini. amapayipi—njengoba kwenzeka eFlint, eMichigan.
Ukuze uthole ukuthi yini ngempela emanzini omphakeli wakho uma ephuma endaweni, ungakwazi ukubheka ku-inthanethi umbiko wokuthembeka komthengi ogunyazwe wumhlinzeki wakho wempahla wasendaweni we-EPA;uma kungenjalo, bonke abahlinzeki bamanzi bomphakathi kudingeka ukuthi bakunikeze i-CCR uma uyicela. Kodwa ngenxa yokungcoliswa okungaba khona kwezansi nomfula, indlela okuwukuphela kwayo yokuqiniseka ngamanzi ekhaya lakho ukukhokha ilebhu yendawo yamanzi ukuze ihlolwe.
Njengomthetho wesithupha: uma ikhaya lakho noma umphakathi wakho usukhulile, iba nkulu ingozi yokungcoliswa komfula.I-EPA ithi “amakhaya akhiwe ngaphambi kuka-1986 maningi amathuba okuthi asebenzise amapayipi omthofu, izinto ezisetshenziswayo kanye nesoda”—izinto ezindala ezake zaba yinsakavukela. ungahlangabezani namakhodi amanje.Iminyaka yobudala iphinda inyuse amathuba okungcoliswa kwamanzi angaphansi komhlaba alawulwa ngaphambilini embonini, okungaba yingozi, ikakhulukazi uma kuhlangene nokucekelwa phansi okuhlobene neminyaka yamapayipi angaphansi komhlaba.
Uma umndeni wakho uphuza ngaphezu kwamalitha amabili kuya kwamathathu amanzi aphuzwayo ngosuku, isihlungi samanzi angaphansi kukasinki singase sibe inketho engcono kunesefa sejeke. kuqediwe, njengethangi lamanzi.Ukuhlunga “uma kudingeka” kuphinde kusho ukuthi uhlelo olungaphansi kukasinki lunganikeza amanzi anele okupheka — ngokwesibonelo, ungagcwalisa ibhodwe ngamanzi ahlungiwe ukuze upheke i-pasta, kodwa awusoze wagcwalisa ngokuphindaphindiwe. imbiza yalokho.
Izihlungi ezingaphansi kwe-sink nazo zivame ukuba nomthamo omude kakhulu neminyaka yokuphila kunezihlungi ze-canister-imvamisa amakhulu amagaloni nezinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu, uma kuqhathaniswa namalitha angu-40 namalitha angu-40 ezihlungi eziningi ze-canister.izinyanga ezimbili.Futhi ngenxa yokuthi izihlungi ezingaphansi kukasinki zisebenzisa umfutho wamanzi kunokuba amandla adonsela phansi ukusunduza amanzi ngesihlungi, izihlungi zazo zingaba ziminyene, ukuze zikwazi ukususa uhla olubanzi lwezinto ezingase zibe ukungcola.
Ngakolunye uhlangothi, zibiza kakhulu kunezihlungi ze-pitcher, futhi ukushintshwa kwesihlungi nakho kubiza kakhulu ngokwemibandela ephelele kanye nesilinganiso ngokuhamba kwesikhathi.Isistimu iphinde ithathe isikhala kukhabhinethi kasinki ebingatholakala ukuthi igcinwe.
Ukufaka isihlungi esingaphansi kukasinki kudinga ukufakwa kwamapayipi kanye nezingxenyekazi zekhompuyutha eziyisisekelo, kodwa kuwumsebenzi olula kuphela uma usinki wakho usuvele unembobo kampompi eyodwa. ama-disc aphakanyisiwe kumasinki ensimbi, noma amamaki kumasinki amatshe okwenziwa).Ngaphandle kokungqongqoza, uzodinga ukubhoboza imbobo kusinki, futhi uma usinki wakho ungaphansi kwecounter, uzodinga futhi ukubhoboza imbobo ku-countertop. Uma njengamanje unomshini wokukhipha insipho, igebe lomoya lomshini wokuwasha izitsha, noma isifafazi esiphathwa ngesandla kusinki, ungasikhipha futhi ufake umpompi lapho.
Lezi zihlungi zamanzi, amathangi kanye nama-dispensers agunyazwe ukususa ukungcola kanye nokwenza ngcono amanzi okuphuza asekhaya.
Lo mhlahlandlela umayelana nohlobo oluthile lwesihlungi esingaphansi kukasinki: lezo ezisebenzisa isihlungi se-cartridge futhi zithumela amanzi ahlungiwe kumpompi ohlukile. Lezi izihlungi ezingaphansi kukasinki ezidume kakhulu. Zithatha isikhala esincane futhi ngokuvamile kulula ukuzifaka futhi gcina.Basebenzisa izinto ze-adsorbent—imvamisa ikhabhoni ecushiwe kanye nezinhlaka zokushintshisana nge-ion, njengezihlungi ze-pitcher—ukubopha nokuqeda ukungcola.Asikhulumi ngezihlungi ezifakwe kumpompi, amasistimu e-osmosis ahlehlayo, noma amanye amathangi noma iziphakeli.
Ukuqinisekisa ukuthi sincoma kuphela izihlungi ongazethemba, siye sagcina ukuthi ukukhetha kwethu kuqinisekiswe ngokwezinga lemboni: ANSI/NSF.I-American National Standards Institute kanye ne-NSF International yizinhlangano ezizimele, ezingenzi nzuzo ezisebenza ne-EPA. , abamele imboni kanye nabanye ochwepheshe ukuthuthukisa amazinga aqinile ekhwalithi kanye nemithetho yokuhlola yezinkulungwane zemikhiqizo, okuhlanganisa okokuhlunga amanzi.Amalabhorethri amabili amakhulu agunyaziwe okuhlunga amanzi yi-NSF International uqobo kanye ne-Water Quality Association (WQA).Zombili zigunyazwe ngokugcwele eNyakatho IMelika nge-ANSI kanye ne-Standard Council of Canada yokuhlolwa kokugunyazwa kwe-ANSI/NSF, futhi kokubili kufanele kuhambisane ncamashi namazinga okuhlola afana ncamashí nezimiso. Izihlungi azihlangabezani nezindinganiso zokunikeza isitifiketi kuze kudlule isikhathi sazo sokuphila esilindelekile, zisebenzisa amasampula “anselele” alungisiwe. angcoliswe kakhulu kunamanzi amaningi kampompi.
Kulo mhlahlandlela, sigxila kuzihlungi ezinezitifiketi ze-chlorine, i-lead, ne-VOC (ama-volatile organic compounds).
Ukuqinisekiswa kwe-chlorine (ngokwe-ANSI/Standard 42) kubalulekile ngoba i-chlorine ivamise ukuba yimbangela “yokunambitheka okubi” kwamanzi kampompi.
Ukuthola isitifiketi somthofu kunzima ukuzuza ngoba kusho ukwehlisa izixazululo ezinothile ngomthofu ngaphezu kwama-99%.
Ukuthola isitifiketi se-VOC nakho kuyinselele, njengoba kusho ukuthi isihlungi singasusa cishe izinhlanganisela zezinto eziphilayo ezingaphezu kuka-50, kuhlanganise nama-biocides amaningi avamile kanye nezandulela zezimboni. ikhombe lezo ezenza kangcono kakhulu.
Sinciphise ukusesha kwethu ngokuqhubekayo ukuze sikhethe izihlungi ezigunyazwe ku-ANSI/NSF Standard 401 entsha, ehlanganisa inani elikhulayo lokungcola okuvela emanzini ase-US, njengemithi. Futhi, akuzona zonke izihlungi ezinezitifiketi ezingu-401, ngakho lezo ezinaso (kanye nezitifiketi zokuhola kanye ne-VOC) yiqembu elikhethwe kakhulu.
Ngaphakathi kwalesi sigaba esingaphansi esiqinile, sibe sesibheka labo abanomthamo omncane wamamalitha angu-500. Lokhu kulingana nempilo yesihlungi cishe izinyanga eziyisithupha ngokusetshenziswa kanzima (amalitha angu-2¾ ngosuku).Emizini eminingi, lawa amanzi anele ahlungiwe okuphuza nsuku zonke nokupheka.(Abakhiqizi bahlinzeka ngamashejuli anconyiwe okushintsha izihlungi, ngokuvamile alinganiswa ngezinyanga esikhundleni samagalani; silandela lezi zincomo ezilinganisweni zethu nasezibalweni zezindleko. Sincoma ukuthi ngaso sonke isikhathi kusetshenziswe izihlungi zangempela, hhayi izihlungi zezinkampani zangaphandle.)
Ekugcineni, silinganise izindleko zangaphambili zalo lonke uhlelo ngokuqhathanisa nezindleko eziqhubekayo zokushintsha isihlungi. Asizange sibeke iphansi lentengo noma uphahla, kodwa ucwaningo lwethu lubonise ukuthi nakuba izindleko zangaphambili zisukela ku-$100 kuya ku-$1,250 futhi izindleko zokuhlunga zisuka ku- $60 kuya cishe ku-$300, lo mehluko awuzange uboniswe kumodeli ebiza kakhulu ebiza kakhulu kuma-specs.Sithole izihlungi ezimbalwa ezingaphansi kukasinki ezingaphansi kuka-$200 ngenkathi zinikeza izitifiketi ezinhle kakhulu nokuphila isikhathi eside.Laba babe abagcina bethu. Ngaphezu kwalokhu. , siphinde sibheke:
Phakathi nocwaningo lwethu, ngezikhathi ezithile siye sathola imibiko yokuvuza okuyinhlekelele kubanikazi besihlungi samanzi angaphansi kukasinki. Njengoba isihlungi sinamathiselwe entanjeni yokungena amanzi abandayo, uma isixhumi noma ipayipi liphuka, amanzi azophuma kuze kuvalwe ivalve yokuvala. - okusho ukuthi kungathatha amahora noma izinsuku ukuthi uthole inkinga, kube nemiphumela emibi kakhulu ekulimaleni kwakho kwamanzi .Lokhu akuvamile, kodwa kunezingozi ongazikala lapho ucabangela ukuthenga isihlungi esingaphansi kukasinki.Uma usithenga, landela imiyalelo yokufaka ngokucophelela, uqikelela ukuthi ungaphusheli isixhumi, bese uvula amanzi kancane kancane ukuze uhlole ukuvuza.
I-osmosis ehlehlayo noma isihlungi se-R/O siqala ngohlobo olufanayo lwesihlungi se-cartridge esisikhethe lapha, kodwa sengeza indlela yokuhlunga ye-osmosis yesibili ehlehlayo: ulwelwesi olunezimbotshana ezivumela amanzi ukuthi ludlule kodwa luhlunge amaminerali ancibilikisiwe nokunye. izinto.
Singase sixoxe ngokujulile ngezihlungi ze-R/O kumhlahlandlela wesikhathi esizayo.Lapha siyazenqaba ngokuphelele.Zinezinzuzo ezilinganiselwe zokusebenza ngaphezu kwezihlungi ze-adsorption;bakhiqiza amanzi amaningi angcolile (ngokuvamile bahlunga amalitha angu-4 amanzi amoshiwe "ashaywayo" ngegaloni ngalinye), kuyilapho izihlungi ze-adsorption zingakhiqizi noma yimaphi amanzi angcolile;bathatha indawo eyengeziwe , ngoba ngokungafani nezihlungi ze-adsorption, basebenzisa ithangi elingu-1 noma 2 galoni ukugcina amanzi ahlungiwe;anensa kakhulu kunezihlungi ze-adsorption ezingaphansi kukasinki.
Senze izivivinyo zaselabhorethri ezihlungini zamanzi eminyakeni embalwa edlule, futhi okuyinhloko esikuthatha ekuhlolweni kwethu ukuthi isitifiketi se-ANSI/NSF isilinganiso esinokwethenjelwa sokusebenza kwesihlungi. Lokhu akumangazi uma kubhekwa ukuqina okwedlulele kokuhlolwa kwezitifiketi.Kusukela lapho, sithembele ekutholeni isitifiketi se-ANSI/NSF esikhundleni sokuhlola kwethu okulinganiselwe ukuze sikhethe izimbangi zethu.
Ngo-2018, sahlola isistimu yesihlungi samanzi e-Big Berkey edumile, engaqinisekisiwe nge-ANSI/NSF, kodwa ethi ihlolwe kakhulu kumazinga e-ANSI/NSF.Lokhu okuhlangenwe nakho kuqinise ukuphikelela kwethu ekutholeni isitifiketi kweqiniso kwe-ANSI/NSF kanye nokungathembani kwethu isimangalo esithi “ANSI/NSF Tested”.
Kusukela lapho, nango-2019, ukuhlola kwethu kugxile ekusebenzisekeni komhlaba wangempela kanye nezinhlobo zezici eziwusizo nezithiyo eziba sobala njengoba usebenzisa le mikhiqizo.
Esikukhethayo i-Aquasana AQ-5200, eyaziwa nangokuthi i-Aquasana Claryum Dual-Stage.Isici sayo esibaluleke kakhulu kuze kube manje ukuthi izihlungi zayo zinezitifiketi ezingcono kakhulu ze-ANSI/NSF zezimbangi zethu, okuhlanganisa i-chlorine, i-chloramines, i-lead, i-mercury, ama-VOC, ama-multiple "ukungcola okuvelayo" kanye ne-PFOA kanye ne-PFOS .Ngaphandle kwalokho, i-faucet yayo kanye ne-hardware yamapayipi yenziwe ngensimbi eqinile, ephakeme kakhulu kunepulasitiki esetshenziswa abanye abakhiqizi.Futhi uhlelo nalo luhlangene kakhulu.Okokugcina, i-Aquasana AQ- I-5200 ingelinye lamanani angcono kakhulu esiwatholile kuzihlungi ezingaphansi kukasinki, izindleko ezingaphambili zalo lonke uhlelo (isihlungi, izindlu, umpompi, kanye nehardware) ngokuvamile ziba ngu-$140 ngaphambili, kanti isethi yokubili inenani layo. $60 esikhundleni sesihlungi. Lokho kungaphansi kwezimbangi eziningi ezinezitifiketi ezibuthakathaka.
I-Aquasana AQ-5200 iyisitifiketi se-ANSI/NSF (PDF) ukuze ithole ukungcola okungu-77. Kanye ne-Aquasana AQ-5300+ eqinisekisiwe efanayo ne-AO Smith AO-US-200, lokhu kwenza i-AQ-5200 uhlelo oluqine kakhulu esilukhethayo. .(I-AO Smith ithole i-Aquasana ngo-2016 futhi yamukela iningi lobuchwepheshe bayo; i-AO Smith ayinazo izinhlelo zokuqeda umugqa womkhiqizo we-Aquasana.) Ngokuphambene, isihlungi esihle kakhulu se-Pur Pitcher esinokwehliswa komthofu sinezitifiketi ezingama-23.
Lezi zitifiketi zihlanganisa i-chlorine, esetshenziselwa ukubulala amagciwane emanzini kamasipala futhi iyimbangela ehamba phambili "yokunambitheka okubi" emanzini kampompi;umthofu, ophuma emapayipini amadala kanye ne-solder yamapayipi;i-mercury;phila i-Cryptosporidium ne-Giardia flagellates, amagciwane amabili angaba khona;kanye ne-chloramine, isibulala-magciwane esiqhubekayo se-chloramine esisetshenziswa kakhulu izitshalo zokuhlunga eningizimu ye-United States, i-chlorine ehlanzekile ewohloka ngokushesha emanzini afudumele.I-Aquasana AQ-5200 iphinde iqinisekiswe ngenani elikhulayo le-15 "engcolile" etholakalayo ezinhlelweni zamanzi zomphakathi, kuhlanganise I-BPA, ibuprofen, ne-estrone (i-estrogen esetshenziswa ekulawuleni inzalo);ye-PFOA ne-PFOS— - Izinhlanganisela ezisekelwe ku-Fluorine ezisetshenziselwa ukwenza izinto ezingaqinile futhi zathola iseluleko sezempilo se-EPA ngoFebhuwari 2019. (Ngesikhathi sokubonisana, abakhiqizi abangu-3 kuphela balezo zihlungi abaqinisekisiwe i-PFOA/S, okwenza lokhu kuphawuleke ngokukhethekile.) Iphinde iqinisekiswe nge-VOC.Lokhu kusho ukuthi ingasusa ngempumelelo izinhlanganisela zezinto eziphilayo ezingaphezu kuka-50, okuhlanganisa izibulala-zinambuzane eziningi kanye nezandulela zezimboni.
Ngaphezu kwama-resin okushintshaniswa kwekhabhoni ecushiwe kanye ne-ion (okujwayelekile uma kungezona zonke izihlungi ezingaphansi kukasinki), i-Aquasana isebenzisa ubuchwepheshe obubili bokuhlunga ukuze bathole isitifiketi. Ngama-chloramines, yengeza ikhabhoni eyi-catalytic, i-porous futhi ngenxa yalokho ikhabhoni ecushiwe ekhiqizwa ngokwelapha ikhabhoni enegesi yokushisa okuphezulu.Ku-Cryptosporidium kanye ne-Giardia, i-Aquasana yenza isihlungi ngokunciphisa usayizi wembobo ube ama-microns angu-0.5, amancane ngokwanele ukubamba ngokoqobo.
Ukuqinisekiswa okuphakeme kwesihlungi se-Aquasana AQ-5200 kwakuyisizathu esiyinhloko esisikhethayo.Kodwa ukuklama kwayo kanye nezinto zokwakha nakho kuyakuhlukanisa.I-faucet yenziwe ngensimbi eqinile, njengama-T-clamps axhuma isihlungi kumbhobho. Abanye abancintisana nabo basebenzisa ipulasitiki eyodwa noma kokubili, behlisa izindleko kodwa bandise ubungozi bokufaka okuphambanayo kanye nokufaka okungalungile.I-AQ-5200 isebenzisa izifakelo zokucindezela ukuze kuqinisekiswe uphawu oluqinile, oluvikelekile phakathi kweshubhu kanye neshubhu lepulasitiki elithwala amanzi liwayise esihlungini. kanye nompompi;abanye abaqhudelana nabo zisebenzisa okufakwayo okuphushwayo okulula, okungavikeleki kancane.Impompi ye-AQ-5200 itholakala ngokuqedwa okuthathu (i-nickel ebhulashiwe, i-chrome epholishiwe, nethusi elifakwe amafutha), kuyilapho abanye abaqhudelana nabo bengenakho ukukhetha.
Siphinde sithanda uhlobo oluhlangene lwesistimu ye-AQ-5200.Isebenzisa izihlungi, ngasinye sikhulu kancane kune-soda can;ezinye ezinye, kuhlanganise ne-Aquasana AQ-5300+ ngezansi, zilingana nebhodlela ilitha.Ngesihlungi esifakwe kubakaki abakhwezwayo, i-AQ-5200 ilinganisa amayintshi angu-9 ukuphakama, amayintshi angu-8 ububanzi, nama-intshi angu-4 ukushona;i-Aquasana AQ-5300+ ikala amayintshi angu-13 x 12 x 4. Lokhu kusho ukuthi i-AQ-5200 ithatha indawo encane kakhulu ekhabetheni likasinki, ingafakwa ezindaweni ezimpintshana lapho amasistimu amakhulu engakwazi ukulingana, futhi ishiya isikhala esiningi ngaphansi. -isitoreji sikasinki.Udinga cishe amayintshi angu-11 esikhala esime mpo (sikalwe phansi ukusuka phezulu kwendawo ebiyelwe) ukuze uvumele ukushintshwa kwesihlungi, kanye namasentimitha angu-9 esikhala esivundlile esingavinjiwe eduze kodonga lwekhabhinethi ukuze ufake indawo ebiyelwe.
I-AQ-5200 ikalwe kahle kakhulu ngezihlungi zamanzi, izuza ukubuyekezwa okungu-4.5 koku-5 kwezingu-800 kuwebhusayithi ye-Aquasana kanye nokubuyekezwa okungu-4.5 kwezicishe zibe ngu-500 e-Home Depot.
Okokugcina, intengo yamanje yohlelo oluphelele lwe-Aquasana AQ-5200 icishe ibe ngama-$140 (imvamisa ithengiswe cishe ngama-dollar ayi-100) kanye nama- $60 ngesethi yezihlungi ezishintshayo ($120 ngonyaka ngomjikelezo wokubuyisela wezinyanga eziyisi-6), i-Aquasana AQ. -5200 Ingenye yamanani angcono kakhulu phakathi kwezimbangi zethu futhi ishibhile ngamakhulu amadola kunamanye amamodeli anezitifiketi ezinde kakhulu.Iyunithi ihlanganisa isibali sikhathi esizoqala ukukhala uma udinga ukushintsha isihlungi, kodwa sincoma ukusetha okuphindaphindayo. isikhumbuzi sekhalenda ocingweni lwakho.(mancane amathuba okuthi usigeje.)
Uma kuqhathaniswa nabanye esiqhudelana nabo, i-Aquasana AQ-5200 inokugeleza okuphezulu okuphansi (0.5 gpm vs. 0.72 noma ngaphezulu) kanye nomthamo ophansi (amalitha angu-500 vs. 750 noma ngaphezulu).Lona umphumela oqondile wesihlungi sayo esincane ngokomzimba.Sekukonke, sicabanga ukuthi lokhu kushiyeka okuncane kudlulwa ukubumbana kwayo.Uma wazi ukuthi udinga ukugeleza okuphezulu nomthamo, i-Aquasana AQ-5300+ ilinganiselwe ku-0.72 gpm namalitha angu-800, kodwa ngeshejuli efanayo yokushintsha isihlungi yezinyanga eziyisithupha, i-Aquasana Clarium. I-Direct Connect inikeza izilinganiso ezifika ku-1.5 gpm Flow to 784 amalitha nezinyanga eziyisithupha.
Isikhathi sokuthumela: Jun-10-2022